Vidio ny vovony Nmn (1094-61-7) -Manufacturers & Mpamatsy - orinasa
Ny vovony Nmn (1094-61-7)
Ny vovo-dronono Nicotinamide mononucleotide ("NMN", "NAMN", ary "β-NMN") dia nukleotida iray nalaina avy amin'ny ribose sy ny nikotinamide. adenine dinucleotide (NADH).
Sokajy: Anti fahanterana
Horonantsary vovoka mononucleotide Nicotinamide
Fampahalalana Base Base
anarana Vovoka NMN
Anarana simika beta-Nicotinamide mononukleotida
Bika Aman 'endrika fotsy fotsy
Solubility mihena anaty rano
Storage Condition Hygroscopic, -20˚C Frizisk, ao ambanin'ny Atmosphère Inert
fampiharana Ny Nicotinamide mononucleotide ("NMN", "NAMN", ary "β-NMN") dia nucleotide iray nalaina avy amin'ny ribose sy nikotinamide.
β-vovoka Nicotinamide Mononucleotide
β-Nicotinamide Mononucleotide vovoka azo ampiasaina ho activator na booster ny NAD. Ny NAD dia coenzyme iray tompon'andraikitra amin'ny homeostasis sy ny fitoviana amin'ny vatana. Ny fihenan'ity coenzyme ity dia tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny vokatry ny fahanterana satria mandanjalanja ny vokatry ny rafitry ny taova rehetra.
Inona ny vovo-tany β-Nicotinamide Mononucleotide?
Nicotinamide mononucleotide, dia nucleotide izay hita voajanahary amin'ny voankazo sy legioma sasany. Izy io dia avy amin'ny Vitamin B3 na niacin, izay fantatra indrindra amin'ny fampiasana azy ho toy ny fanampiana anti-antitra.
Ny vovoka NMN, rehefa avy nohanina dia niova ho NAD +, coenzyme matanjaka ilaina amin'ny homeostasis ao amin'ny vatana. Ity coenzyme ity dia inoana fa mitana andraikitra lehibe amin'ny dingan'ny famokarana angovo ao amin'ny vatana, izay manampy ny lanjan'ny NAD + fotsiny. Ny fihenan-danja lehibe amin'ny haavon'ny NAD + dia hita miaraka amin'ny fahanterana, izay, amin'ny lafiny iray, dia manazava ny tsy fisian'ny angovo, ny havizanana ary ny havizanana hita amin'ny fahanterana. Ny fahafahan'ny NMN miova ho NAD + izay noheverina ho antony nampiasana azy ho toy ny fitambarana anti-antitra.
Ny fahitana NMN ho toy ny famenon-tsakafo fanoherana fahanterana dia mbola eo an-dàlam-pandrosoana saingy mety hitrandraka ny fampiasana ny Nicotinamide riboside (NR) ho toy ny famenon'ny anti-antitra. NR koa dia niova ho NAD + ao amin'ny vatana ary io fitambarana io dia nodinihina tsara miaraka amin'ny fanampiana ny NR voamarika ho azo antoka ho an'ny olombelona.
Rehefa avy natelina, ny vovoka NMN dia natsofoka tao anaty tsinay tao anaty rà tao anatin'ny dimy ambin'ny folo minitra niaraka tamin'ny fizotrany nanomboka tao anatin'ny roa ka hatramin'ny telo minitra nisotroany. Aorian'ny fitrohana, dia tehirizina ao amin'ny hozatra taolana, mazàna, aorian'ny nanovana azy ho NAD +. Ny NMN amin'ny ankapobeny dia manana bioavailability tsy dia tsara, izay manakana ny fahafaha-manaony. Ilaina ny fanovana ny NMN ho NAD + satria indray mandeha amin'ny periphery dia simba ny CD38, ka tsy mitombo ny haavon'ny NAD + ary noho izany dia tsy misy ny voka-dratsin'ny vovoka NMN.
Mekanisma fiasan'ny vovoka NMN
Ny NMN dia nukleotida voajanahary izay, raha vao mihinana, dia mivadika ho fitambarana hafa, Nucleotide riboside na NR. NR mihitsy no ampiasaina matetika ho famenony fa ny NMN fanampin-tsakafo dia mety hanolo ny famenon-NR saika tanteraka.
NMN dia navadika ho NR tao amin'ny vatana satria tsy afaka miampita ny fonon'ny sela tahaka ny tenany izy ary mila avadika ho rafitra kely kokoa izay afaka mamakivaky mora foana ny fonon'ny sela. Aorian'ny fidiran'ny NMN ao amin'ny sela ho NR dia navadika ho NMN indray izy io alohan'ny nanodinkodina azy ho coenzyme NAD +. Na dia tsy mazava aza hoe iza ny anzima tompon'andraikitra amin'ny fanovana voalohany sy ivelan'ny sela NMN ho NR, dia fantatra fa ny anzima tompon'andraikitra amin'ny fiovam-po intraselular dia nikotinamide ribose kinase na NRK.
Amin'ny intracellularly, ny NMN dia mandray anjara amin'ny fizotry ny famokarana angovo ao amin'ny mitochondria sela, na dia tsy mivantana aza, amin'ny endrika NAD +. Ny fomba fiasa lehibe ananan'ny fitambarana dia ny famokarana angovo amin'ny alàlan'ny famenoana ny haavon'ny coenzyme tena ilaina, NAD +. Ny fomba fiasa mitovy amin'izany dia tompon'andraikitra amin'ny tombony hafa amin'ny vovoka NMN.
Fampiasana Powder NMN
Ny vovoka NMN dia be mpampiasa ho toy ny famenon-javatra amin'ny tanjona maro, na izany aza, ny fampiasana matetika ny fitambarana dia toy ny fanampiana anti-antitra. Mampiasa vovoka NMN ihany koa ny olona noho ny fahaizany manafoana fiovana maro mifandraika amin'ny taona toy ny fahazoana lanja, ny fihenan'ny fahatsapana insuline ary ny faharatsian'ny fahitana. Ankoatr'izay, dia azo ampiasaina amin'ny fisorohana ny fiovan'ny vanim-potoana amin'ny fitenenana, izay tompon'andraikitra amin'ny fanovana genetika ilaina amin'ny pathogenesis amin'ny aretina maro.
Soa azo avy amin'ny vovoka NMN
Tamin'ny voalohany, dia nino fa ny tombotsoan'ny vovoka NMN dia voafetra amin'ny tombony azo avy amin'ny taonan'ny fitambarana fa ny fikarohana fanampiny dia manaporofo fa raha raisina amin'ny fahatanorana dia mety hanampy amin'ny fitsaboana fepetra maro hafa izay tsy misy ifandraisany amin'ny fahanterana .
Ny tombontsoa mahazatra indrindra amin'ny vovoka NMN izay tohanan'ny porofo ara-tsiansa dia voalaza etsy ambany, miaraka amin'ny fikarohana fikarohana izay manohana azy ireo.
Fitantanana ny hatavezina
Ny fanadihadiana natao vao haingana izay natao tamin'ny maodelim-biby dia nahitana fa ny suplementement NMN dia nampitombo be ny tahan'ny homamiadana sy ny tahan'ny metabolism ao amin'ny totozy. Ny vovon-tsakafo NMN dia niteraka fitomboana marim-pototra amin'ny fomba fiteny izay ilaina mba hanakanana ireo hormonina mitaona ny filan'ny nofo, toy ny leptin sy sirtuin. Izany dia nino ny mpikaroka fa ny NMN dia afaka miady amin'ny hatavezina amin'ny olon-dehibe, izay tena mahasoa, satria ny hatavezina amin'ity sokajin-taona ity dia matetika mifandray amin'ny komorbidities.
Ankoatr'izay, ny NMN dia voatahiry ao amin'ny sela matavy toy ny NAD +, izay manaporofo fa mahasoa satria ny NAD + amin'ny tavy adipose dia tompon'andraikitra amin'ny fampitomboana ny tahan'ny metabolisma, ka miteraka fihenan'ny harona ao amin'ny vatana. Ny fahafahan'ny fitambarana hampiakarana ny tahan'ny metabolisma sy ny fanakanana ny fahazotoan-komana dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny olona hampiasa ny fanampin-tsakafo ho an'ny tanjon'ny fihenan-danja, na dia tsy mijaly amin'ny hatavezina mifandraika amin'ny taona aza izy ireo.
Ny vovon-tsakafo NMN dia noheverina fa misy fiatraikany tsara momba ny diabeta toy ny fandeferana glucose sy ny fahatsapana insuline, indrindra amin'ny sela peripheral.
Fikarohana vao haingana natao tamin'ny maodelim-biby no nahitana fa ny fanampiana NMN dia nampitombo ny haavon'ny NAD +, izay ao amin'ny sarakaty dia manampy amin'ny fanatsarana ny asan'ny sela-sela. Satria ny fihenan'ny sela pancreatic no antony lehibe ao ambadiky ny pathogenesis ny aretina metabolika amin'ny alàlan'ny fanovana ny haavon'ny insuline, io asan'ny vovoka NMN io dia tena zava-dehibe amin'ny fitsaboana diabeta. Tamin'ny fanadihadiana hafa nifantoka tamin'io lohahevitra io ihany, dia hita fa ny fahaizan'ny NMN mandevona tavy dia mandaitra amin'ny atin'ny tavy. Misy fitomboan'ny okididia lipida ao amin'ny atiny vokatry ny famenon'ny NMN, izay tsy mampihena ny haavon'ny tavy ao amin'ny vatana fotsiny fa manampy amin'ny fampitomboana ny fahatsapana ny sela amin'ny insuline.
Fanamarihana lehibe iray eto dia na dia voaporofo aza fa miasa manohitra ny diabeta mellitus ireo fomba fiasa ireo, noho izany, amin'ny fanampiana amin'ny fitantanana ny aretina, ireo vokatra ireo dia mety hahomby amin'ny fikorontanan'ny metabolika hafa izay mety hiteraka vokatry ny fahanterana.
Ny fitomboan'ny rà mandriaka
Hitan'ny mpikaroka fa maro ny sela endothelial ao amin'ny lalan-drà azo alefa ary ny fiasan'izy ireo dia azo hatsaraina amin'ny fomba mivaingana miaraka amin'ny fanampiana NMN. Mety hanampy amin'ny fitsaboana aretin-kozatra izany, indrindra rehefa manentsina ny fikorianan'ny rà izy ireo ary miteraka toe-javatra mahatsiravina na atahorana ho faty na fitsaboana maika.
Hatsarao ny fiasan'ny kognita
Ny NAD + dia zava-dehibe amin'ny fiarovana sy fahaveloman'ny neurons ao amin'ny ati-doha. Ny fanampiana miaraka amin'ny vovoka NMN dia hita fa manatsara ny fiasan'ny kognita amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haavon'ny NAD +. Mba hitsapana an'io teôria io dia nisy fanadihadiana natao izay nitondran'ny modely biby misy ratra amin'ny ati-doha amin'ny P7C3-A20, fitambaran'ny mpamokatra NMN. Hita fa tsy ny fahalalana no nohatsaraina tamin'ireto totozy ireto, fa najanona koa ny neurodegeneration bebe kokoa. Matetika dia mandroso ny ratra amin'ny ati-doha ary miharatsy hatrany hatrany ny toe-tsain'ny marary, na izany aza, ny fitsaboana tamin'ny P7C3-A20 dia nanakana ny fivoaran'ny TBI saika tanteraka. Nanatsara ny fahaveloman'ny sela ihany koa izy io ary namadika ny fahasimbana, tamin'ny lafiny iray.
Tombontsoa iray hafa amin'ny vovoka NMN ao amin'ny ati-doha ny tombony azo antoka sy miaro amin'ny sakana amin'ny ati-rà, izay zava-dehibe amin'ny fisorohana fanafody, poizina, ary aretina azo avy amin'ny lalan-dra.
Fampitomboana ny faharetana sy ny atletisma
Ity tombotsoan'ny NMN ity dia avy amin'ny tombotsoan'ny famokarana angovo NMN. Rehefa mihombo ny haavon'ny angovo ao amin'ny vatana, dia mitombo be ny fahafaha-manao hetsika ara-batana miaraka amin'ny hery ilaina. Ireo vokatry ny vovoka NMN dia nodinihina tamin'ny fikarohana izay nahitana fa ny atleta mandray ny famenon-tsakafo dia manana fahaizana aerobika avo kokoa noho ireo izay tsy mandray ny famenony. Ankoatr'izay, ireo atleta ireo dia afaka niaritra fiofanana matanjaka be noho ny namany hafa.
Fanamafisana ny tsimatimanota
Ny suplement NMN dia noheverina fa misy fiantraikany mahery vaika amin'ny vatan'olombelona ary nomena fa ny fikarohana momba ny fitambarana dia nanomboka nandritra ny areti-mandringana COVID-19, io teoria io dia notsapaina tamin'ity virus ity. Ny fandinihana natao tamin'ity lohahevitra ity dia nahitana fa ny NMN taorian'ny fanovana ho NAD + dia misy fiantraikany manimba ny hery fiarovana izay tsy vitan'ny hoe mahomby amin'ny COVID-19 fa koa amin'ny viriosy hafa.
Ny fandinihana dia nahitana fa ny olon-dehibe, vokatry ny fahanterana ara-batana, dia mijaly noho ny fihenan'ny hery fiarovan'ny hery fiarovan'ny vatana. Izany dia miteraka fitomboan'ny aretina ao amin'ity sokajin-taona ity ka izany no antony angatahina handray vaksiny hiadiana amin'ny otrikaretina manokana. Na izany aza, ny fanampiana NMN amin'ity sokajin-taona ity dia hita fa manatsara ny hery fiarovan'ny vatana ka ampy amin'ny ady amin'ny otrikaretina sy ny fihenan'ny aretina.
Ankoatr'izay, ny NMN dia mampihena ny aretina azo avy amin'ny fahanterana na ny hatavezina, izay mampihena bebe kokoa ny mety fahafatesan'ny COVID-19 amin'ny olon-dehibe. Tombony azo amin'ny fanampiana NMN manokana ho an'ity sokajin-taona ity sy ny viriosy.
Fanatsarana ny fahavokarana amin'ny vehivavy
Hitan'ny fandinihana fa ny fiovana manimba ny kalitaon'ny oosit dia vokatry ny tsy fifandanjana amin'ny haavon'ny NAD + ao amin'ny mitochondria, ka nahatonga ny fiovan'ny teboka sy ny fiovan'ny fototarazo. Izany no nanatsoahan-kevitry ny mpikaroka fa ny suplement NMN dia afaka manatsara ny kalitaon'ny oosit ary manatsara ny fahavokarana amin'ny vehivavy mihoatra ny 30 taona ka hatramin'ny 35 taona.
Vokatry ny vovoka NMN
β-Nicotinamide Mononucleotide dia fitambarana voajanahary nalaina avy amin'ny niacin. powder-Nicotinamide Mononucleotide vovoka dia nantsoina ho azo antoka hampiasain'ny olombelona noho ny fisiany voajanahary ary ny tsy fisian'ny poizina voalaza sy ny voka-dratsy.
Misy ny voka-dratsiny mifandraika amin'ny vovoka NMN raha tsy tehirizina tsara amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, lavitra ny tara-masoandro. Ankoatr'izay, ny vokatra dia tsy misy vokany mifandraika amin'izany. Ny teboka iray manan-danja eto dia ny mitandrina ny fatra sy ny fotoana anaovana ny vovobony satria ny fampiasana matetika ny vovoka NMN dia afaka mampihena ny herin'ny vongan-tsolika.
Maninona no mividy Powder NMN avy amin'ny Factory Manufacturer?
Ny orinasan'ny mpanamboatra anay dia mamokatra vovoka NMN izay amboarina miaraka amin'ny torolàlana sy ny protokol rehetra. Ny fijerena akaiky dia omena amin'ny fisorohana ny fandotoana ny vovoka NMN miaraka amin'ny poizina na loto mety hiteraka fahavoazana bebe kokoa noho ny soa ho an'ny vatan'olombelona. Ny vokatra dia voasedra amin'ny fifehezana kalitao, mandritra sy aorian'ny fizotry ny famokarana. Ny vokatra dia omena marika ihany koa amin'ny mpanara-maso fanaraha-maso kalitao hanatanterahana ny fizotran'ny fampahatsiahivana, raha ilaina, mora sy mahomby.
Ankoatr'izay, ny vovoka NMN ao amin'ny ozinina mpanamboatra anay, araka ny voalaza tetsy ambony, dia voatahiry amin'ny toe-javatra mety izay voatazona ihany koa mandritra ny fitaterana ireo famenony.
Yoshino, J., Baur, JA, & Imai, SI (2018). NAD + Mpanelanelana: Ny biolojika sy ny mety ho fitsaboana amin'ny NMN sy ny NR. Metabolisma sela, 27(3), 513-528. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2017.11.002
Chen, X., Amorim, JA, Moustafa, GA, Lee, JJ, Yu, Z., Ishihara, K., Iesato, Y., Barbisan, P., Ueta, T., Togka, KA, Lu, L. , Sinclair, DA, & Vavvas, DG (2020). Vokatry ny neuroprotective sy ny fomba fiasan'ny nicotinamide mononucleotide (NMN) ao amin'ny maodelin'ny degenerative photoreceptor an'ny detinament retina. be taona, 12(24), 24504-24521. https://doi.org/10.18632/aging.202453
Miao, Y., Cui, Z., Gao, Q., Rui, R., & Xiong, B. (2020). Ny famenon-tsakafo Nicotinamide Mononucleotide dia mamadika ny kalitaon'ny fihenan'ny Oocytes efa be taona. Tatitra momba ny sela, 32(5), 107987. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107987
Mills, KF, Yoshida, S., Stein, LR, Grozio, A., Kubota, S., Sasaki, Y., Redpath, P., Migaud, ME, Apte, RS, Uchida, K., Yoshino, J. , & Imai, SI (2016). Ny fitantanan-draharaha maharitra an'ny Nicotinamide Mononucleotide dia manalefaka ny fihenan'ny fikaolojika efa ela nifanaovana tamin'ny totozy. Metabolisma sela, 24(6), 795-806. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2016.09.013
Uddin, GM, Youngson, NA, Sinclair, DA, & Morris, MJ (2016). Fampitahana an-doha amin'ny lohateny fitsaboana amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny NAD (+) Preciseurs Nicotinamide Mononucleotide (NMN) sy ny fampihetseham-batana 6 herinandro amin'ny totozy vehivavy matavy loatra. Mpiaro amin'ny pharmacology, 7, 258. https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00258
Ny vovony Nicotinamide Riboside Chloride (23111-00-4)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) vovoka (53-84-9)
Glucoraphanin vovoka 30% (21414-41-5)
Vovoka asidra alpha-lipoika (1077-28-7)
Powder Urolithin B 1139-83-9